बिराट नेपाल 2015-10-20
यूटुवबाट सर्च गर्दै मालश्री धुन घन्काउछु । प्रवासी आँगनमा गोदावरी , मखमली र सयपत्री पनि फुलाएकी नै छु । बाहिर चलेका सिरसिरे बतास र घामको किरणले पनि दसैँ नसंझाएको होइन तर यो मनले मनग्गे दसैँ नमनाएको युग भो । परार साल बुवा बित्नुभयो मेरो दसैँ झन खल्लो भयो । बुवाआमाको अभिभावकत्वमा सपरिवारसँग मानेका ती सुखद दशैहरु संझदै एउटा आलेख लेखेको थिए अनलाइनखबरमा । जसमा मेरा बाल्यकालका सुमुधुर दसैँको चित्रण थियो आफ्नो परिवारका साथमा साटेका खुशीहरुको ।
मंदिरका घंट र धुप बत्ती , नयाँ लुगा , टोलछिमेकमा तास कौडा जुवाडेका जमघट , ओखलमा पिनेका मसलाका वासना , आकाशभरि रंगीचङ्गी चंगाहरु , आमाले हाल्नु भएको खल्पी ( काक्रोको ) अचार दसैँका पर्यायवाची झैँ लाग्ने । " निते निते मंगलम माई ...." को भजन गुनगुनाउदै बुवा घरको तलमाथि गर्नुहुँदा मेरो दसैँको रङ्ग इन्द्रेणी हुन्थ्यो । अब कहाँ पाउनु त्यो सुनौलो समय ? ती दसैँ संझदै एघार दसैँ प्रवासमै बिते । बुवाले एउटा कमीज हालेको थाहा हुन्न थियो तर हामी छोराछोरीलाई भने बजार लगेर रोजाई रोजाई लुगा किनिदिनु हुन्थ्यो । दसैँका आवश्यक सरसमानको अभाव हुन कहिले दिनुभएन । धेरैजसो विना माग नै हाम्रा आवश्यकताहरू परिपुर्ति हुन्थे । दसैँ त झन हाम्रो मागको पेटारो बनेर आउथ्यो । दसैँको परिपूरक नै बुवा । अनि रमाइलो नहोस् ?
हुनत त मन जति नै खुसी किन नहोस् , तर प्रवासका दशैमा स्वदेशको जस्तो रौनक कहाँ हुन्छ र ? न पहेलपुर धानको बाला नै झुल्छन् यहाँ , न त ढकमक्क सयपत्री नै फुल्छन् । तर सत्य चाहिँ के हो भने , स्वदेशमा सबै आफ्नाहरु रमाइलोमा छन् , खुसी छन् भने हामीलाई यहाँ त्यसै रमाइलो लाग्ने रहेछ । काम र थकानका व्यस्त समय वावजुद पनि । यसपालिको दसैँ पनि संघारमै छ । फेसबुक , फोनमा शुभकामनाको ओइरो लागिरहेकै छ । तर मन भने खुसी छैन। स्वदेशको न राजनीतिक अवस्था ठिक छ , न सामाजिक अवस्था । अस्तव्यस्त जनजीवन पेट्रोल र ग्यासका लामा लाइनहरु देखेर म अनुमान गर्न सक्छु , कति बोझिलो , रित्तो छ यो दसैँ ! स्वदेशवासी कुन उत्साहमा दसैँ मान्दै होलान् कठै ! हामी नेपालीमा धैर्यता र सहन गर्ने गुण अलि बढी नै छ सायद । नालायक सरकारको खटनपटनलाई चु नबोलि सहन बाध्य हुनुपरेको । लंगडो सरकार ! न भारतसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्न सक्छ न तेस्रो मूलकसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्न नै । न त स्वाभिमानको सामर्थ्य नै देखाउछ । खाली सत्ता होड़वाजीको दुर्घन्धित खेल खेल्न माहिर छ ।
भूकम्पमा आफ्नाजन गुमाएकाहरुको यसै पनि दसैँ छैन यसपालि । कतिका आफन्त छैनन् , आफन्त हुनेका घर छैनन् । सबै हुनेले पनि नहुनेका सामु कुन उमंगले दसैँ मनाउनु ? उसैमाथि अस्थिर अर्थव्यवस्था र इंधनको समस्याले अन्योल नेपाली समाजले के दसैँ मान्दै होलान् ! सुख दुखका नि मात्रा हुँदारहेछन् । प्रवासी मनले मानेका वेखुशी दसैँको जति नै दुख मनाउ गरेपनि यसपालिको जति नरमाइलो त कहिले लागेको थिएन । बुवा बितेको दसैँ भन्दा पनि ।
मलाई यतिखेर लागिरहेको छ , मेरो बुवा जस्तै अभिभावक देशको सरकार भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ! एउटा असल अभिभावक सधैँ संतानको सुखको लागि प्रयत्नरत हुन्छ । आफ्नो मात्र हित चिताउने अभिभावक भए भने घर र संतानको बिचल्लि हुनेरहेछ।
दसैँ नेपालीको परम्परा र संस्कृतिको धरोहर हो । हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हो । मनको मैलो फालेर शुभकामना र सद्भाव बाड्ने चाड हो। दुख पिरलाई बिर्सेर हास्ने रमाउने हो । नेपालीहरू हास्न सके भने देश बॉच्छ पक्कै ! मैले बुझेको देश यत्ति हो । दसैँ त मेरो यसपालि पनि हुँदैन । जेठाजु बित्नु भयो । रातो टिका र जमरा असाध्यै मन पर्छ तर यसपालि लगाउन पाउदिन । मेरो दसैँ जस्तोसुकै होस् । देशवासीको , प्रवासवासी सबै नेपालीको दसैँ सधैँ सहज र सुखमय होस् कामना मात्र गर्न सक्छु । सबैलाई विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना ।
ह्युस्टन , टेक्सास ।